Cilmi-baarayaashu waxay sababeen kombiyuutarrada dadku inay si qarsoodi ah u booqdaan boggaga internet-ka ee laga yaabo inay joojiyaan dawladaha xagjirka ah
Bishii Maarso 2014, Sam Burnett iyo Nick Feamster ayaa soo bandhigay Encore, oo ah nidaam lagu bixiyo munaasabadda dhabta ah ee caalamiga ah ee faafreebka internetka. Si arrintan loo sameeyo, cilmi-baarayaasha, ee ku yaal Georgia Tech, waxay ku dhiirri-galiyeen milkiilayaasha boggaga inay ku dhejiyaan xarfaha yar-yar ee kumbuyuutarkan feylka faylasha boggooda internetka:
Haddii aad dhacdo in aad booqato bogga internetka leh nidaamka qashinka ee ku yaala, boggaaga webkaagu wuxuu isku dayi doonaa inuu la xiriiro websaydh ay cilmi-baarayaashu ay kormeerayaan faafreebnaanta suurtagalka ah (tusaale ahaan, bogga qaybta siyaasadeed ee la mamnuucay). Kadibna, galka shabakadaada ayaa ku soo wargelin doona cilmi-baarayaasha ku saabsan haddii ay awood u laheyd inay la xiriirto boggaga internetka ee xaddidan (jaantuska 6.2). Dheeraad ah, dhammaanba kuwaan waa la arki doonin ilaa aad ka fiirisid faylka shabakada HTML ee bogga internetka. Codsiyada boggaan oo aan la arki karin ayaa dhab ahaantii ka muuqda shabakadda (Narayanan and Zevenbergen 2015) , laakiin marar dhif ah ayay ku lug leeyihiin isku dayga cad ee lagu cabbiro faafreebka.
Jaantuska 6.2: Naqshadaynta qaabka cilmi baarista ee Encore (Burnett and Feamster 2015) . Websaydhka asalka ah wuxuu leeyahay nambarka koodhka yaryar ee ku jira (Tallaabo 1). Kombiyuutarkaagu wuxuu sameeyaa bogga internetka, kaas oo kiciya hawlaha cabbirka (tallaabada 2). Kombiyuutarkaagu wuxuu isku dayayaa inuu galo bartilmaameedka cabbirka, kaas oo noqon kara website-ka koox siyaasadeed oo mamnuuc ah (tallaabo 3). Faafreeb, sida dawlad, ayaa markaa joojin karta helitaankaaga bartilmaameedka (tallaabada 4). Ugu dambeyntii, kombuyuutarku wuxuu soo sheegaa natiijooyinka codsigan cilmi-baarayaasha (aan lagu muujin sawirka). Waxaa dib-u-bixiyay ogolaansho ka timid Burnett and Feamster (2015) , sawir 1.
Nidaamkan lagu cabbirayo faafreebka waxaa ku jira waxyaabo farsamo oo soo jiidasho leh. Haddii tiro ku filan oo website ah ay ka mid yihiin qashinka fudud ee code, ka dibna Encore wuxuu bixin karaa waqti dhab ah, heer caalami ah oo ka mid ah boggaga internetka censored. Ka hor inta aan la bilaabin mashruuca, cilmi-baarayaashu waxay bixiyeen IRB-yada, kuwaas oo diiday in ay dib-u-eegaan mashruuca sababta oo ah ma'aha "maadooyinka aadanaha ee cilmi-baarista" (Sharciga Guud) (qawaaniinta shuruucda xukumaya inta badan baaritaanka maalgalinta ee dawladda dhexe ee Mareykanka; fiiri lifaaqan taariikheed ee dhammaadka cutubkan).
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii Encore la bilaabay, si kastaba ha ahaatee, Ben Zevenbergen, ka dibna arday qalinjabiyey, ayaa la xiriiray cilmi-baadhayaasha si ay u soo ururiyaan su'aalo ku saabsan anshaxa mashruuca. Gaar ahaan, Zevenbergen waxa uu ka walaacsan yahay in dadka waddammada qaarkood ay khatar galin karaan haddii kombiyuutarku isku dayay inuu soo booqdo boggaga xasaasiga ah qaar ka mid ah, dadkuna ma aysan oggolaan inay ka qayb qaataan daraasadda. Iyadoo lagu saleynayo wadahadalkaas, kooxda Encore ayaa bedelay mashruuc si ay u dardar geliyaan faafreebka kaliya ee Facebook, Twitter iyo YouTube-ka, sababtoo ah saddexaad oo isku daya inay galaangalaan goobahaasi waa caadi inta lagu jiro websaydhka caadiga ah (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Ka dib marka la ururiyo xogta adoo adeegsanaya naqshad bedelan, warqad sharaxaysa habka iyo natiijooyinka qaar ayaa loo gudbiyey SIGCOMM, shir aqooneed oo kombuyuutar oo heer sare ah. Guddiga barnaamijka ayaa ka mahad celiyay taageerada farsamada ee waraaqda, laakiin waxa uu muujiyay walaac ku saabsan la'aanta oggalaansho laga ogaaday ka qaybgalayaasha. Ugu dambeyntii, guddiga barnaamijka ayaa go'aansaday in ay daabacaan waraaqda, laakiin qoraalka saxiixa oo muujinaya welwelka anshaxa (Burnett and Feamster 2015) . Qoraalkan saxiixan oo aan waligiis loo isticmaalin ka hor SIGCOMM, kiiskani wuxuu horseeday dood dheeraad ah oo ku saabsan saynisyahannada kombiyuutarka dabeecadda anshaxa ee cilmi-baarista (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .